४६ वर्षदेखि महिलाको पेटभित्र थियो यस्तो खतरनाक चीज, अपरेशन गर्ने डाक्टरसमेत डराए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
४६ वर्षदेखि महिलाको पेटभित्र थियो यस्तो खतरनाक चीज, अपरेशन गर्ने डाक्टरसमेत डराए
एजेन्सी। संसारमा यस्ता अनौठा घटनाहरु सार्वजनिक हुन्छन् जसलाई विश्वास गर्न निकै कठिन हुन्छ । २००१ मा मोरक्कोमा यस्तै अनौठो घटना सार्वजनिक भएको थियो । यहाँ उक महिलाको पेटबाट ‘स्टोन बेबी’ निकालिएको थियो । ती महिला सन् १९५५ मा २६ वर्षको उमेरमा गर्भवती भएकी थिइन् । तर उनले त्यतिबेला बच्चालाई जन्म दिन सकिनन् । सिजेरियनको क्रममा ज्यान जाने डरले उनले बच्चा जन्माउन सकेकी थिइनन् ।
यो घटनाको ४६ वर्षपछि उनको पेटबाट बच्चा निकालियो जुन बच्चा देख्दा संसार चकित परेको थियो । जाहरा अबौतालिब नामकी ती महिला १९५५ मा बच्चालाई जन्म दिनेवाली थिइन् । तर ४८ घण्टा ब्यथा लागेपछि पनि जब उनले बच्चा जन्माउन सकिनन् तब उनलाई अस्पताल लगियो । अस्पतालमा डाक्टरहरुले उनको सिजेरियन डेलिभरी गर्न भने । यसअघि जाहराले एक महिलालाई सिजेरियनका क्रममा मरेको देखिसकेकी थिइन् । यही डरले उनी अस्पतालबाट भागिन् ।
अस्पतालबाट भागेको कैयौं दिनपछि जाहराको पेट निकै दुख्न थाल्यो । उनलाई यस्तो लाग्थ्यो कि अब उनले बच्चा जन्माउनेछिन् तर यस्तो भएन । केही दिनपछि जाहराको पेट दुख्न छोड्यो । मोरक्कोमा यस्तो मान्यता छ कि बच्चा आमाको पेटमा वर्षौंसम्म सुत्न सक्छ । यही सोचेर जाहराले आफ्नो गर्भको कुरा बिर्सिइन् र तीन बच्चालाई एडप्ट गरेर पालिन् । यो घटनाको ४६ वर्षपछि अचानक ७२ वर्षको उमेरमा जाहराको पेटमा तीब्र पीडा हुन थाल्यो । जब डाक्टरले उनको एमआरआइ गराए बच्चा उनको पेटमै भएको पाए । यसपछि सर्जरी गरेर बच्चा निकालियो । यो बच्चालाई डाक्टरहरुले स्टोन बेबी नाम दिए किवकि यति समयमा बच्चा पत्थर भइसकेको थियो ।